Warlords: Kristaly Hery | Coinfalls Casino
Warlords: Kristaly Hery
The NetEnt slot Warlords: Kristaly Hery brags ny raharaha lehibe Tsy mitovy amin'ny ankamaroan'ny ny sariitatra-nanana lohahevitra slots. Warlords: Kristaly Hery mitondra miara- 3 warlords miady eto ny tenany mba hanangona kristaly-pahefana. Noho izany, izy ireo tsy mamela vato unturned ary hitrandrahana ny fahefana rehetra mba handresy harena ho anareo sy ny tenany. The 3 warlords no The barbariana, The Priestess, ary The Samurai. Izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny fiarahany nanipy baolina ireo endri-javatra toy ny maimaim-poana avy spins sy re-spins, stacked tampon-tanety sns. mba hahazoana antoka ianao mahazo lehibe sy manana fotoana mahafinaritra madio.
Koa satria 1996, NetEnt no tao an-lalao teknolojia raharaham-barotra. Ny orinasa dia manana anjara fanompoana ao amin'ny firenena isan-karazany manerana izao tontolo izao tahaka an'i Soeda, Malta, Ukraine, Gibraltar, USA, ary Polonina. Izy ireo dia ny farihy mahery 700 mpiasa manompo over 100 izao tontolo izao ny aterineto Casino mpandraharaha. Misy manodidina 200 Lalao mampientam-po mandra-bola ny daty sy ny lisitra efa mandrakizay fanitarana.
Warlords: Kristaly Hery manolotra anareo ny maizina fototra amin'ny 5 reels antsakany sy andavany nifindra amboniny. Ny slot dehibe hatrany ny miady amin'ny fanahy 30 paylines akaiky. Ny hilokana isan-karazany manomboka avy farafahakeliny ny £ 0,15 ho ny ambony indrindra ny £ 150. Ny gameplay manatitra RTP 96.89% ny mpilalao. Ny slot lalao miteraka ady sehatra tonga lafatra sy miteraka rivo-piainana mamirapiratra ho an'ny mpilalao. Ny bibidia dia ny trompetra marika karatra ary miasa toy ny hafa marika hanaovana ny tsikombakomba fandresena ho anao. Misy 2 karazana tampon-tanety eo amin'ity lalao, namely the standard wilds and the overlay wilds.
The 3 warlords ihany koa ny hampiely fanehoana an'ohatra. Ary izao mitaky ny Bountiful The barbariana, Ny Priestess sy ny Samurai spins natolotra maimaim-poana ao amin'ny slot.
Manapa-kevitra ny ady izay endri-javatra rehetra, dia ho zatra mandritra ny gameplay. dia, misy ny sasany koa ny lafiny kisendrasendra ny lalao izay tsy maintsy ho tia. Ireo no Final Chance endri-javatra, Battle endri-javatra, ary ny stacked marika, izay rehetra mitondra mahafinaritra maro loka ho anao.
Ny isan'ny endri-javatra fanampiny eo amin'ny lalao azo antoka fa mahatonga ity hijoro slot avy ny miaramila ny slots azo tany an-tsena. Raha manana mampientam-po ao amin'ny iray gameplay breakneck haingana handrotsaka ny endri-javatra toy izany no manangon ny, avy eo Warlords: Kristaly Hery no tsara slot ho anao.